DOWNLOAD Theme Rikoooo Windows 98-2000-XP-Vista - Desambra 2011 - Freeware
Fa ny foto-kevitra mifanaraka amin'ny Windows 7 kitiho eto
Ny Windows Theme hahita dia foto-kevitra tanteraka. Tsy manohana Windows 98, 2000, XP sy Vista 32 potika sy 64 potika. Misy ny tsary ny sary avy any Flight simulator, ary koa ny sary tena ara fiaramanidina mandeha ao amin'ny tanteraka mba sendra 20 isaky ny minitra.
Foto-kevitra io ihany koa ny Windows modifies start-up sy ny fanakatonana feo. Ankafizo ny hihaino ny mamy feon'ny ny A320 fanesorana sy ny feon'ny fiaramanidina iray maotera izay manentsin. Koa, rehefa hahafoana ny fako, dia hihaino ny feon'ny fiaramanidina fianjerana (ovaina).
Ny foto-kevitra ihany koa hanova ny sary masina eo amin'ny biraonao, toy ny foana sy ny fako feno fako, ny mpampiasa fampirimana, ny Network kisary, ka hanoloana azy ireo amin'ny sary masina manodidina ny lohahevitra fiaramanidina. Ny mpampiasa sary Azo hisolo ny iray amin'ireo rikoooo (tsy voatery).
Azonao atao ihany koa ny manampy fanao screensaver (tsy voatery), izay mirakitra ny-tsary ny efijery izay tsy manana winnings vato avy amin'ny Concours.
Ary rehefa afaka izany, tianao kokoa? Eny, azo atao izany, satria afaka manolo ny Windows fidirana lamba (tsy voatery) nofidian'ny ny Top Screen eo amin'ny fifaninanana.
Ary farany, dia afaka ihany koa (optionally) hanoloana ny totozy kitondro!
Misaotra anareo rehetra mpandray anjara amin'ny Theme:
Noforonina 1 Jan 2012